केवल साठी वर्षअघि काठमाण्डौ युरोपजस्तै भव्य रहेछ, काठमाण्डौ वास्तवमैं वै’भवपूर्ण रहेछ !::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
मङ्ल, माघ २१, २०७६
६०-७० वर्षअघि काठमाडौं ठ्याक्कै युरोपजस्तै रहेछ । यत्ति हो, युरोप आज पनि उस्तै छ तर हामी फेरियौं ।
तलको बागबजारको फोटो आजको कोपेनहेगनभन्दा कत्ति कम छैन ।
हामीसँग दरबार पनि रहेछन्, विश्वकै सुन्दर मन्दिर पनि । रानी पोखरीदेखि कमलपोखरीसम्म पोखरी त कतिकति ! लण्डनको बिगबेनजस्तै शानसँग उभिएको घण्टाघर पनि ! चट्ट शहर हेर्न धरहरा त थिँदै थियो, सास फेर्न थुप्रै टुँडिखेल र गौचरनहरू पनि रैछन् । नदी त अलि अस्तिसम्म पौड़ी खेल्न मिल्ने नै थिए ।
तिनका किनारमा बनेका घाटहरूमा साँझ मान्छे जम्मा भएर भलाकुसारी गरेको तस्बीर सम्झिनुस् त ! शहरमा घोड़ाहरू थिए, अनेक वन्य जीवजन्तु र चराचुरुङ्गी पनि थिए । युरोपमा आज पनि छन् ।
‘जुद्ध वारुण यन्त्र’ भन्ने दमकल सुविधा पनि शहरसँग रहेछ । पिउने पानीका लागि सुन्धारादेखि गुर्जुधारासम्म सुन, तामा र ढुङ्गाले बनेका निरन्तर कलकल पानी बग्ने धाराहरू थिए रे । दरबार हाइस्कुलदेखि त्रिचन्द्र कलेजसम्म र नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालदेखि वीर हस्पिटलसम्म त थिए नै ।
कुमारी जात्रा, इन्द्रजात्रा, घोड़े जात्रा, मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रादेखि लाखे नाचसम्म कति हो कति मनोरञ्जन र सांस्कृतिक जमघटहरू ! रोचक पक्ष के रहेछ भने बाहिरका शासकले जितेर काठमाडौंमा शासन गरे पनि यहाँका कला, संस्कृति र चाडबाड़चाहिँ संरक्षण नै गरेका रहेछन् ।
मान्छे बढ़ेसँगै पूर्वाधार बढ़ेनन् । आज न सुन्धारामा पानी आउँछ न टुँडिखेलमा घाम तापेर खेल खेल्न पाइन्छ । स्कुल भवनमा आगो लाग्यो भने सुरक्षित ठाउँमा जम्मा हुन कतै खाली जग्गा बाँकी छैन ।
तस्बीरहरू फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटबाट लिइएका हुन् ।
इजरायलमा कोरोनाले गर्दा ४६ को मृत्यु, संक्रमितको संख्या ८ हजार नाघ्यो – कोरोनाबाट ४७७ पूर्णरुपमा निको भए
नेपालको लागि अबका २ हप्ता निर्णायक – इटलीको जस्तो कोरोना महामारी अचानक नेपालमा आउन सक्छ ?
ओलीले नबोलेरै आफैले प्रमाणित गरिदिए यो सरकार अति निकम्मा भयो, अब आरोप प्रत्यारोपको कुनै अर्थ रहेन -रबि
अमेरिकामा एकै दिन चार नेपालीको मृ’त्यु
फिलिपिन्समा मास्क नलगाउने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले गो-ली हानेर मार्‍’यो
मन्त्री ढकाल भन्छन्: रोगबाट बाँचे पछि कुरा गरौंला, अहिले हिलो नछ्यापौं
बिरामी ‘रिसिभ’ गर्ने जिम्मा सेना र स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय
कोरोना रोकथाममा ५० हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई खटाउने सरकारको निर्णय
खरिपाटी क्वरेण्टीनमा रहेका सबै ९४ जनाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ : मन्त्रालय
फोन सम्पर्क छैन् ? सित्तैमा रिचार्ज पाउनुहोस्
घरमै २५ लाख रुपैया नगद भएका मालिकले पनि कोरोना राहत लिएपछि ….
उदयपुरका नौं मध्ये पाँच जनाको कोरोना रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’, चार जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी